HORDHAC: West Ham v Arsenal – Gool FM
HORDHAC: West Ham v Arsenal
( Premier League ) 12 Jan 2019. Arsenal ayaa booqaneysa dhigeeda West Ham kulamada 22-aad ee Premier League Asbuucan.
Todobaadkan ayaa dib loo ambaqadayaan cayaaraha sare ee England kaddib asbuuc uu hakad galay kaddib markii la cayaarayay koobka FA Cup.
Waqtiga: 03:30 pm ( SGA )
Samir Nasri ayaa qarka u saaran inuu markii u horreysay cayaaro horyaalka Premier League tan iyo bishii August 2016, kaddib markii uu kulankii ugu horreeyay u saftay West Ham koobka FA Cup todobaadkii tagay.
Marko Arnautovic ayaa kamid ahaan-shihiisa cayaarta uu shaki ku jiraa iyadoo la wariniyo inuu doonayo u dhaqaaqaista horyaalka China, halka Fabian Balbuena uu maqanaan doono siddeed asbuuc kaddib qaliin looga sameeyay jilibka.
Mesut Ozil, Laurent Kosciely iyo Hector Bellerin ayaa kamida lix xiddig oo kooxda Arsenal heli karto kaddib dhaawacyo ay qabeen.
Shkodran Mustafi iyo Nacho Monreal ayaa sido kale taama inkastoo doodi ay ku jirto.
Daafaca Konstantinos Mavropanos ayaa kasoo kabtay dhibaato gumaarka ah.
West Ham ayaa badisay kulan qura 21-koodii cayaar ee u dambeeyay oo ay Premier League la dheeshay Arsenal (4 bar-baro, iyo 16-guuldarro). Guusha ay ka gaareeb ayaa aheyd bishii August 2015.
Gunners waa guuldarro la’aan 11-kulan oo ay u martisay West Ham dhammaan tartamada tan iyo bishii November 2006 (8 guul, iyo 3-barbaro).
Guushii u horreysay uu Unai Emery ku hogaamiyo Arsenal wuxuu ka gaaray kulankan kulamadii hore ee xagaagan.
Kooxda lagu naaneyso Hammers ayaa qasaartay 29-cayaar oo ay Premier League la kulantay Arsenal, taasoo ka badan guuldarroyin kasoo gaaray kooxaha kale.
West Ham ayaa badisay shan kamida siddeedii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka.
Arsenal waa guul la’aan afartii kulan ee u dmabeysay oo ay marti ahaayeen Premier League (2-bar-baro, iyo 2-guuldarro), iyadoo laga dhaliyay sagaal gool seddaxdoodii dheel ee u dambeysay.
BAL EEG: Manchester United oo SHAXDEEDA ugu fiican ku soo galeysa kulanka Axada ee Tottenham
HORDHAC: Brighton v Liverpool